I-Isuzu mu-X yingadlangadla yeSUV ebanzi | Isolezwe
I-Isuzu mu-X yingadlangadla yeSUV ebanzi
ezezimoto / 26 August 2018, 10:59am / FANELESIBONGE BENGU
KUNEZIMOTO othi uma uzibona ingathi ungavele upakish’ umthwalo uvel’ uhambe (njengokucula kukaDladla Mshunqisi.)
Lokho ukucatshangiswa wukubona ukuvuleka kwayo nanezinto ofuna ukuthi ikwazi ukuzenza emgwaqweni. Enye yazo yi-Isuzu mu-X. Phela le moto yingadlangadla yeSUV okuyisigaba sezimoto okukhonya kuso iToyota Fortuner neFord Everest.
Ngikholwa ukuthi ubuhle bemoto kwabathenga kulesi sigaba akusiyo into abayibheka kakhulu kunokuthi yenzani. Kodwa ngingakuveza ukuthi ayiyimbi neze.
Ngaphambili ishaya ngamaBi-LED projector headlamps akhanyisa bha namaLED daytime running lights avele azikhanyele uma uke wayidumisa. Eceleni inezitebhisi zokugibela, amarimu angu-18 inch kuthi ngemuva ibe namalambu eLED.
Njengoba inkulu nje (ingu-4 825mm ubude, ububanzi * -1 860mm, ukuphakama ngu-1 860mm kuthi iwheelbase ie ngu-2 845mm), isikhala ngaphakathi wudedangendlale njengoba ilayisha abagibeli abayisikhobisa. Nokho ezangemuva uma usuthe ukuqinaqina uhambo ngeke uluthokozele ngoba zincane. Izihlalo ziyisikhumba futhi esomshayeli ukwazi ukusihlela ngogesi.
Phakathi nendawo ngaphambili kunemulti-function infotainment system engu-9 inch colour touchscreen ekhombisa nenkombandlela, umsakazo futhi ikwazi ukudlala iDVD, MP3, i-xhuma iselula ngeBluetooth noma nge-Apple CarPlay noma i-Android Auto. I-screen sibuye siveze ingemuva uma uhlehla.
Esiteringi ulawula umsakazo ngamabhathini, cruise control nokubamba iselula. Uma abagibeli ngemuva befuna ukuzidlalela iselula nibe nihamba ikhona imbombo yokufaka i-USB beshaje.
Injini ethwala le moto ayidinge kwethulwa ngoba ngeyaziwayo kwa-Isuzu engu-3.0-litre four-cylinder intercooled turbodiesel engine kadizili. Inamandla angu-130 kW ne-torque engu-380 Nm.
Bayigaxe i-gearbox eyi six-speed automatic transmission. Ngike ngathi ukupepenyeka edolobheni abanye abashayeli ngibabukela phansi ngenxa yokuphakama kwayo.
Ubukhoma bekhamera ngemuva bekwenza kungabi wumzukuzuku ukuyipaka futhi nesiteringi sijika kalula. Ohambeni olude umsindo awumkhulu ngaphakathi futhi emabhampini ayizweli. Yifake obhuqwini noma ogwadule ngeke ize ikulalise khona ngoba inamandla kwazise idonsa nawo womane amasondo. Okwakho ukuyifaka ku-4H noma uyifake ku-4Low range uma udinga ukuthi amasondo aqhwande ngokweqile.
Ukushiya kwayo umhlaba ngo-230mm, i-approach angle engu-24 degrees nedeparture angle engu-25.1 degrees kwenza ungene emigwaqeni ebhedayo ngaphandle kovalo. Ngakwezokuphepha le moto ifika namabhreki e-ABS ane-Electronic Brakeforce Distribution ne-Emergency Brake Assist. Ine-Electronic Stability Control, Traction Control, Hill Start Assist neHill Descent Control. Ibuye ibe nama-airbag ngaphambili kanjalo nama-curtain airbag.
Ngenyanga eyedlule kudayiswe amamu-X angu-76 nokuyizinkomba zokuthi iyangena kancane kubantu. Omunye uzothi lesi yisibalo esincane kodwa khumbule ukuthi yethulwe ngoMeyi. Kuzothatha isikhathi ukuthi ifice omakhonya, uma iyofika, kodwa inakho konke okungayenza ibalwe nezihamba phambili.
Isuzu mu-X 3.0 4x4 AT R629,100
Ifika ne warranty ne-Isuzu Roadside Assistance yeminyaka emihlanu noma * -120 000km, iservice plan yeminyaka emihlanu noma * -90 000km ne anti-corrosion warranty yeminyaka emihlanu. Kumele iye kwisevisi njalo ngemuva kuka-15 000 noma izinyanga ezingu-12.